China feeder factory, vatengesi - China feeder vagadziri
Bhandi feeder ine yakapusa dhizaini uye yakagadzikana mashandiro, kunyanya iyo hombe yekudyisa vhoriyamu inofarirwa nevashandisi. Yedu hombehunyanzvi budiriro ndeyeye arch breaker chishandiso, iyo inogona kunyatsogadzirisa kumanikidza pamuromo webhin uye kudzivirira iyo yakadeurwa zvinhu pamuromo webhin.
CypB yakateedzana yakawandisa disc feeder iri mhando yevhoriyamu yekudyisa michina nekuenderera uchipa. Iyo yakaiswa mukuburitswa kwemidziyo yekuchengetera silo, silo uye bhakiti bhaini.
Yakapetwa mashoma Mass vibrating feeder inotora musimboti wekaviri mashoma padyo nesonance inertial vibration. Iko shear simba rinopihwa nerabha, uye chikuru vibration shear rubber chitubu chinotyisa kwemakore gumi.